Kalfadhigii ugu dambeeyay ee muddo Xileedka BF Somaliya oo maanta furmaya & Warbaahinta… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kalfadhigii ugu dambeeyay ee muddo Xileedka BF Somaliya oo maanta furmaya &...
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Sabti maanta ah lagu wadaa in uu furmo Kalfadhigii ugu dambeeyay ee muddo xileedka xildhibaanada Golaha shacabka iyo Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya .
Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu furo munaasabadda lagu daah furayo Kalfadhiga ugu dambeeya ee muddo xileedka golayaasha sharci dejinta halkaas oo khudbad uu ka jeedinayo madaxweynaha.
Qaban qaabada furitaanka Kalfadhigaan ayaa waxa ay ka socotaa Xarunta Villa Hargaysa ee Madaxtooyadda Soomsaliya, halkaasi oo lagu wado in Madaxweynaha uu ka furo kalfadhiga.
Furitaanka Kalfadhigaan, ayaa waxaa lagu casuumay Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada Maamul Goboledyada dalka ka jira, kuwaasi oo xaadir noqon doona furitaanka.
Khudbada Madaxweynaha uu ka hor jeedin doono Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wayn isha loogu haayo, waxaana la sugayaa in Madaxweynaha uu ka hadlo arrimaha doorashada oo uusan wali si toos ah uga hadlin.
Warbaahinta madaxa banaan ayaa loo diiday inay soo tabiyaan wararka la xiriira Kalfadhigaan ama ay goobjoog ahaadaan, taasi oo muujinaysa Villa Soomaaliya inay qabto cabsi la xiriirta in Warbaahinta ay soo bandhigto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Kalfadhigaan.